September 10, 2010 by chowutyee
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, ဟင်းချို | 29 Comments
nice nice i wanna eat treat me too hee 😉
hee… ကိုယ်ရန်ကုန် ဇန်န၀ါရီ ပြန်လာရင် လုပ်ကျွေးမယ်လေ… 🙂
နေခြည် သတ်သတ်လွှတ်စားနေလို့လား…. ငါတော့ ၀ါတွင်း ဥပုဒ်နေ့တိုင်း ဥပုဒ်စောင့်မယ် မှန်းထားပြီ ၃ရက်လားပဲ စောင့်လိုက်ရတယ်.. အဟင့်အဟင့်… 😦
တရားခံတော့ ဖြစ်ပါပြီ… Just kidding!!! ၀တ်ရည်လည်း ဘာထူးလို့လည်း ကိုယ်တိုင် ချက်ပြီ စားနေတာ ခုဝိတ်လျှော့နေရတယ်လေ… 🙂
Brave is so welcome!! 🙂
ဖြူဖြူရေ PDF ဖိုင်ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ ဆိုတာတော့ မလုလုကို ၀တ်ရည် မေးကြည့်လိုက်အုန်းမယ်… လုပ်စားကြည့်ပါနော်… 🙂
ဆားနဲ့ ကြက်သားမှုန့် ထည့်ရင် ရပါတယ် ညီမ.. လုပ်စားကြည့်နော် 😀
I love this soup… thks 🙂